Ebumnuche E-commerce nke Multichannel maka oge ezumike na-agbanwe agbanwe | Martech Zone
Ebumnuche E-commerce nke Multichannel maka oge ezumike na-agbanwe agbanwe
Wednesday, November 25, 2020 Wednesday, November 25, 2020 Josh Wetzel
Echiche nke Black Friday na Cyber ​​Monday dị ka otu ụbọchị iwepụ gbanwere n'afọ a, dị ka nnukwu ndị na-ere ahịa na-akpọsa Black Friday na Cyber ​​Monday na-emekọrịta n'ofe ọnwa November. N'ihi ya, ọ dị obere maka ịhazi otu oge, nkwekọrịta otu ụbọchị n'ime igbe mbata juputara, na karịa maka iwulite usoro ogologo oge na mmekọrịta gị na ndị ahịa n'oge oge ezumike niile, na-enwu enweta ohere ecommerce ziri ezi na oge ziri ezi site na iji ntaneti itinye aka na intaneti.
Nke a bụkwa afọ pụrụ iche n'ụzọ coronavirus na-emetụta ngwa ahịa gafere osisi ahụ. N'ihi nrụpụta nrụpụta na igbu oge, a ga-enwe ụkọ nke ihe karịrị ihe egwuregwu ụmụaka na-achọ kwa afọ. Ya mere, ị ga-enwe ike ịghọta ọdịmma ndị ahịa yana isiokwu yana iji akọ na-ekwupụta ihe ndị ọzọ ma ọ bụ mmelite (site na izipu oge, azụ na nkwupụta ngwaahịa, dịka ọmụmaatụ) ga-abụ isi iji gbanwee mmasị onye zụrụ ihe na ịzụta.
COVID-19 abụwo ihe na-akpali akpali maka mgbanwe dị ukwuu n'ịzụ ahịa n'ịntanetị n'oge ezumike a.
E nwere 45% YoY gbagoro na Q2 maka ịre ahịa n'ịntanetị ma anyị kwesịrị ịtụ anya ịhụ mmụba yiri nke ahụ na Q3 na Q4 n'ihi na ndị na-azụ ahịa na-enwekarị ntụsara ahụ ịzụrụ n'ịntanetị ma manye ha n'ihi mgbochi ụlọ ahịa anụ ahụ n'ọtụtụ akụkụ nke mba ahụ.
Isi Iyi: Clọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọnụ Ọgụgụ US
Amazon Prime Day na Ọktọba dugara n'ọgba aghara nke ndị asọmpi na-enye mbido mbido Black Friday n'afọ a, na -emepụta windo ịzụta ogologo oge karịa naanị izu ụka dị arọ.
Ihe karịrị 25% nke ire ere ahịa niile ga-eme na ntanetị site na 2024 na Forrester na-ebu amụma na ire ahịa ahịa niile ga-ada 2.5% n'afọ a.
Isi Iyi: Forrester
Inweta echiche echebara echiche dị oke mkpa maka ndị ahịa niile na-achọ ịkwụsị mkpọtụ ahụ n'oge oge ọrụ. Site na obere ụlọ ọrụ na-asọmpi na ndị na-ere ahịa buru ibu maka nlebara anya na ndị ahịa, ụlọ ahịa kwesịrị ịdabere na teknụzụ na nkeonwe iji chee echiche n'èzí igbe ilu iji pụọ na igwe mmadụ.
Marketingzụ ahịa Multichannel dị ezigbo mkpa na njikọ aka nke ndị ahịa
Marketingzụ ahịa Multichannel na-enwe ọnụnọ gị mgbe niile maka gị ndị na-azụ ahịa n'ọtụtụ ụzọ, dị ka web, mobile, social and messaging. Uru kasịnụ bụ onye na-azụ gị (onye na-azụ ahịa ma ọ bụ onye ọbịa) nwere ike ịmekọrịta aha gị site na nhọrọ nke ọwa dị iche iche, ma nwee ike ịnwe ahụmịhe na-enweghị atụ, nke na-enweghị ntụpọ na akara gị n'agbanyeghị agbanyeghị channelụ kachasị amasị ha. Igha ahia nke ndi mmadu di nkpa n'ime agwa ndi mmadu na-ere ure nke ndi ahia taa, ndi bia elere anya ahia nke ha.
Ulo oru nke kachasi nma bu ndi emeghe ka ha na-agbanwe agbanwe, karie afo a nyere oria ojoo a. Ulo oru ndi nabatara web, mobile, na ndi mmadu ma jiri uzo di iche iche di iche iche dika email, push, na sms ga eme ka ha hu na ha di n’ebe obula onye choro inweta ya choro itinye aka.
Multichannel abụghị naanị mkpọsa, ọ bụ atụmatụ dị mkpa. Nzọụkwụ mbụ bụ ịghọta ebe ndị ahịa gị ugbu a na-arụ, wee wepụta ihe ndị na-emepe emepe maka onye ọbịa ọ bụla na ntanetị ọ bụla. Malite na weebụsaịtị na-anabata, na-eche na nke ahụ emelitere maka nnweta gafee PC, Mobile na Tablet nchọgharị. Mgbe ahụ mejupụta ọwa ntinye aka mbụ nwere ahụmịhe yiri ya na ebe mgbasa ozi mmekọrịta yana ọwa ozi gị niile. Nke a kwesịrị ịgụnye SMS, ịkwanye na email, ma rụọ ọrụ iji hazie mmasị nke ndị ahịa ọ bụla.
Dị ka ihe atụ nke ahịa ọtụtụ na-arụ ọrụ, anyị nwere ike ile anya na WarbyParker: ha nwere ndị nwere ọgụgụ isi na-echekwa ngwa ahịa, ha wulite ahụmịhe anụ ahụ na nke dijitalụ. Ha na-eji ọkwa ntughari iji tinye ndị ahịa na-arụ ọrụ, SMS maka nhọpụta na iji tinye ndị ọrụ wepụrụ ọwa ndị ọzọ aka, ma jiri email maka izi ozi azụmahịa dị ka nnata. Ọbụna ha na-eji akwụkwọ ozi nkịtị egosipụta ụdị ndị ọhụrụ. Mmetụta ọ bụla na-emetụ aka bụ ozi na-agbanwe agbanwe nke onyinye ha, ya na ọwa ejiri nlezianya kwekọọ maka ebumnuche nke ozi.
Omume Kasị Mma nke Multichannel
Ndị a bụ ụfọdụ omume kacha mma ga - erute ndị ọrụ gị nke ọma ma bulie ndị na - azụ ezumike ezumike site na iji usoro nkwukọrịta ọtụtụ:
Ghọta ebe ndị ahịa gị nọ n'ọrụ ma tinye ego na ọwa ndị ahụ. Nwere ike ịhọrọ ọwa kwesịrị ekwesị, ebe ọ bụ na multichannel apụtaghị ọwa ọ bụla. Họrọ ndị na - eme ka uche gị maka ebumnuche azụmahịa gị, ngwaahịa gị, na nke kachasị mkpa, onye ahịa gị.
Mepụta agbanwe agbanwe. Hazie ihe niile maka ọwa, mana chekwaa akara ngosi na izi ozi n'ofe ha niile
Nweta ikike gị ịzụ ahịa na ọwa ọ bụla: Nwepu aha na ntinye aka nwere ike ịdị ngwa ngwa ma ndị ọrụ nwere ike ịkagbu nnweta ahụ siri ike. Jide n'aka na ịgbaso nkwa gị iji nye ezigbo njirimara onye ọrụ na ọwa ọ bụla. Chee echiche gbasara iwu gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe 1: 4: maka ozi nkwalite ọ bụla gbasara onwe gị, gbaa mbọ hụ na izipụla ozi elebara anya nke ndị ọrụ 1 nwere ezigbo ọnụ ahịa ndị ahịa.
Nkewa, nkeji, nkeji. Ogbe na mgbawa bụ ihe gara aga, ndị na-azụ ahịa abịa ngwa ngwa ịtụ anya izipu ozi dị mkpa na nkeonwe na channelụ ọ bụla. Nye ndị ọrụ nhọrọ ka ha họrọ ọdịnaya ha natara na channelụ. Jiri mmemme ha na data omume ọ bụla ị nwere iji hazie ozi gị ka o kwere mee, ma wepụ ozi ndị na-adịghị mkpa.
Mepụta ngwa ngwa site na Nkwalite Mmetụta Oge. Dịka ọmụmaatụ, Na-agba ọsọ na-akpali akpali "azụmahịa nke oge elekere", na -emepụta ọbụna ngwa ngwa karịa site na ịnye mgbakwunye ego ọzọ na ọnụahịa ọkọlọtọ ọkọlọtọ, ma jiri nke a dị ka ọgbakọ iji bulie njiri nhọrọ nke ndị ahịa maka Push & SMS. Zụọ ahịa ndị ọzọ, InspireUplift hụrụ mmụba 182% na ego ha nwetara site n ’ime ka ha na-ebugoro ha ihe ha na-etinye.
Mee ka izi ozi gị baa ọgaranya. Mee mkparịta ụka dị mkpirikpi ma dị mmetụta n'etiti ozi gị. Na Black Friday, ọkwa ndị bara ọgaranya nwere ike ime ka ndị ọrụ na-abịa maka azụmahịa na-abịa ụbọchị ole na ole tupu nnukwu ụbọchị. Nwere ike ịmepụta ọnụọgụ ruo mgbe Black Friday ga-amalite. Mgbe ahụ, ozugbo ọgba aghara ahụ malitere, ịnwere ike iji izipu ozi bara ụba iji chetara ndị ọrụ oge ole fọdụụrụ njedebe nke Black Friday (ma ọ bụ mgbe ọ bụla azụmahịa gị mechara gwụ).
Kwadebe Na-aga n'ihu Iji Nyocha A / B. Nyocha A / B nwere ike ịbụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị baa uru na ngwa agha gị, nwalee ụdị abụọ nke ozi gị megide ibe gị yana ndị yiri ya, ma lelee nsonaazụ ya. Jiri ihe omume na-eme iji hụ nke ozi na-akpali nsonaazụ achọrọ (karịa naanị pịa), wee jiri ya mee ka mkpọsa ahụ gaa na ndị na-ege gị ntị.
Obi abụọ adịghị ya na nke a bụ afọ ọhụụ maka eCommerce, mana site na ịmegharị ma na-agbaso usoro kachasị mma na ozi ziri ezi na akara aka na ndị ahịa gị, ụdị ka nwere ike ịchụpụ ego na-aga nke ọma iji pụọ na igwe mmadụ.
Tags: 2020Nnwale A / Bnwa ogeagbanwe agbanweihe nchọgharịe-azụmahịaecommercemkpọchimultichannelahịa ọtụtụatụmatụ ahia ọtụtụonseignalnkewaZụọ ahịa Gụnyerena-enwe mmetụta-oge
Josh Wetzel bụ Chief Revenue Officer nke OneSignal, onye ndu ahịa na ntinye aka nke ndị ahịa, na-ebugharị mbugharị mkpanaka, ntinye weebụ, ozi email na ngwa ngwa maka ụlọ ọrụ 800,000. Ọ nwere ọrụ afọ iri abụọ na-ewu azụmaahịa dijitalụ na azụmaahịa ngwanrọ, yana ndị isi na eBay, PubMatic na Bazaarvoice.
WPML: Tugharia WordPress gi na ebe a na otutu akuko na oru ndi choputara
UZE Agagharị: Ebe Ahịa nke Ahịa Maka Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Na-apụnara Ahịa